Thaabit “Qorshahayga waxaa ugu weyn sidii dhalinyarada Muqdisho ay shaqo u heli lahaayeen” – Hornafrik Media Network
Wargeyska ka soo baxa dalka Kenya Standard Digital ayaa maqaal dheer ka qoray maanta waxqabadka duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed isagoo wargeysku ku tilmaamay Thabit inuu yahay nin dhalinyaro ah oo howlkar ah.
Maqaalka oo cinwaan loogaga dhigay “Maayarka ugu da’ada yaraa Muqdisho oo dadaal ugu jira sidii uu isbedel u sameyn lahaa xilli ay horyaalaan mashaakilo dhinaca amaanka iyo miisaaniyadaba.”
Thaabit Cabdi oo 39 jir ah ahna duqii magaalo ee ugu da’ada yaraa ee soo mara caasimada Soomaaliya ayaa isagoo 7 bilood oo kaliya xafiiska jooga waxaa ka dhacay Muqdisho weerarkii argagaxiso ee ugu qasaaraha badnaa ee abid ka dhaca Muqdisho oo ay ku nool yihiin 3 malyan oo ruux.
Gelinkii dambe ee 14kii Oktoobar ayaa magaalada Muqdisho waxa ay dhadhamisay dhibaato xoog leh kadib markii labo baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay uu mid kamid ah ku qarxay isgoyska Zoobe halkaa oo boqolaal ruux qaarna ay ku dhinteen kuwo kalana ku dhaawacmeen halka dhismooyin ganacsi iyo gaadiid badan ay ku burbureen.
Weerarkaa xanuunka badnaa ayaa lagu tilmaamay mid la mid ah kii lagu qaaday New York 9/11 kaasoo ay ku dhinteen illaa saddex kun oo ruux tiro kalana ay ku dhaawacmeen.
“Markii aan maqalnay warka weerarka aniga iyo kooxdeyda waxaan u cararnay halkii uu qaraxii ka dhacay aad ayaan ula amakaagnay waxyeelada ka dhalatay kuwaasoo dhimasho iyo burburba lahaa. Waxaa igu soo dhacday in adeega deg-degga ah ee aan haysano kaligii inuusan ku filneyn,”ayuu yiri guddoomiye Thabit.
Thabit si deg-deg ah ayuu u bilaabay inuu bulshada ugu baaqo gurmad si dadka ku hoos jira burburka dhismooyinka loogaga soo saaro isla markaana dhiig loogu deeqo dadka dhaawaca ah ee isbitaalada la geeyay.
Baaqiisa waxa uu dhaliyay in si deg-deg ah loogaga soo jawaabo oo kumanaan dhalinyaro mutadawiciin ah oo reer Muqdisho ah ay ku soo biiraan iyagoo ka qeybqaatay gurmadka loo fidinayay dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxa.
Dhalinyarada mutadawiciinta ah waxa ay kaalmo ka geysteen sidii looga qaadi lahaa wadada burburka dhismooyinka si dib u dhis loo bilaabo waxaana dib loo furay wadada mashquulka ahayd dhowr maalmood kadib weerarkii Oktoobar.
Dhowr maalmood kadib ayuu duqa magaalada Muqdisho isku soo bax ku baaqay loogaga soo horjeedo weerarka Zoobe waxaana ka soo qeybgalay banaanbaxaa kumanaan ruux iyadoo lagu cambaareeyay ururka Al-shabaab.
Guddoomiye Thabit ayaa sheegay inuu jecel yahay in muuqaalka Muqdisho uu wax ka bedelo uuna soo jiito maalgelin caalami ah.
Mar uu ka hadlayay duqa magaalada Muqdisho weerarada argagaxisada ay ku soo qaadaan magaalada Muqdisho ayuu sheegay inaysan Muqdisho kaliya ahayn halka weeraradu ay ka dhacaan ayna dunida oo dhan saameysay weerarada argagaxisada weliba wadamada reer galbeedka.
“Anigoo ah muwaadin reer Muqdisho waxaan jeclahay in aan magaalada taariiqiga ah in aan ka dhigo sida laga aaminsan yahay oo dadka reer Muqdisho oo dib u dhiska u heelan aan ka dhabeeyo rajadooda ayna noqoto magaalada meel xarun u ah gaanacsiga Geeska Afrika,”ayuu yiri Thaabit.
Maayarka Muqdisho ayaa waxaa uu intaa ku daray; ”Inkastoo weerarada argagaxisada ay ku hayaan Muqdisho ay dadka jooga dalka iyo kuwa dibaddaba ay u qaadan karaan in ay tahay magaalada mid aan ammaan ahayn, ayaa hase ahaatee waxa dhabta ah ee ka dhex jira magaalada ay taasi ka duwan tahay waayo dadka howlahooda si caadi ah ayay u wataan dib u dhiska wadooyinka,xarumaha waxbarashada,ganacsiga iyo guryahaba waa ay socdaan ugu dambeyntiina halista argagaxisada waa mid dhamaan doonta,”
Thaabit ayaa ku tilmaamay qorshihiisa ugu weyn inuu yahay mid lagu xalinayo dhibaatada haysata dhalinyarada gaar ahaan shaqo la’aanta,waxana uu sheegay inuu doonayo in uu joojiyo dhalinyarada ay duufsanayaan Al-shabaab iyo kuwa badaha ka gudbaya oo wadamada reer galbeedka u safraya.
Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay waxa uu si toos ah u shaqaaleysiiyay guddoomiye Thaabit dhalinyaro gaareysa 3,000 kuwaasoo qeybaha kala duwan ee gobolka Banaadir kala kala socday waxana ka mid ahaa kuwo ku noolaa xeryaha barakacayaasha, kuwo laxaadka la’ iyo haween.
“Waxaan qorsheynaynaa in aan ballaarino barnaamijkaa mustaqbalka dhow balse qof walba oo dhalinyaro ah shaqo looma heli karo sida xaqiiqdu tahay balse waxaan isku dayi doonaa in aan abuurno jawi ay maalgeliyaasha iyo shirkadahaba ay ugu soo dhiiran karan si ay dhalinyaraduna fursad ugu noqoto.”ayuu yiri guddoomiye Thaabit oo ka hadlayay qorshaha mustaqablka dhow.
Xildhibaan Fiqi”Madaxda Dowladdu Waxa Ay Dhiirri Galinayaan Musuq Maasuqa Dalka Ka Jira”